जनता बलियो भएका छन, तर त्यो बल असफल पात्र र प्रव्रित्तिकै चयनमा सिमित छ | सिमान्तMarginal जनता बलियो भएका छन, तर त्यो बल असफल पात्र र प्रव्रित्तिकै चयनमा सिमित छ – सिमान्तMarginal
Posted on7Nov 20187Nov 2018 by Jesi for INCOMESCO
जनता बलियो भएका छन त्यो निस्चित हो । तर त्यो बल असफल पात्र र प्रव्रित्तिकै चयनमा सिमित छ, दुरुपायोग भएको छ । परिणाम प्रजातन्त्रको २७ बर्ष (सन १९९० – २०१७) मा २७सै पटक प्रधानमन्त्री बदलिएका छन; जनता हैरान छन । काम गर्ने युवा शक्ति बिदेशिएको छ् । झण्डै ३० प्रतिशत रेमिट्यान्सको भरमा गरिवी घटेको देखाइेएको छ । जग्गाको भाउमा ब्रिद्धी हुँदा आम्दानी बढेको देखिएको छ तर सन १९८२ सम्म धान अन्न निर्यात गरेको मुलुक अहिले खाध्य असुरक्षाको लिष्टमा परेको छ । वास्तविक गरिवी घटेको छैन । झन्डै ८५ प्रतिशत जनताले धर्म ‘स्वत्रन्त्र’ बनाउन दिएको अभिमत दुरुपायोग भएको छ ।
नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्गकिलोमिटर छ । राज्यको जिम्मेवार निकाय संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको तथ्यांकमा भने १ लाख ३७ हजार १ सय ६२ दशमलब ०३५ वर्गकिमि मात्र पाइएको छ । कहाँ हरायो १० हजार १८ दशमलब ९६५ वर्गकिमि ? जनताको मतबाट बलिया भएकाहरु कसैले यो कुरा उठाएनन । प्रतिपक्ष, नागरिक समाज वा बौद्धिक समाज कसैले त्यसलाई उठाएन- सजग भएनन । न त जनता नै सामाजिक संजालमा उत्रियो !!! शक्ति त लेडुप दोर्जेले पनि जनमतबाटै आर्जन गरेका हुन । मतपत्र ‘निलेर’ शासन गर्नेहरु पनि छन । प्रजातन्त्रको काफी दुरुपायोग हुन सक्छ भनेर प्रजातन्त्रवादिहरु असाध्यै चनाखो हुनुपर्ने हो ! यसरी कालन्तरमा जनतालाई कमजोर पारिएको देखिन्छ । प्रजातान्त्रिक अधिकार मुलत: नागरिकहरुको क्षमता ब्रिद्धि वा प्रवर्धन गराउने साधन हो । तर अहिलेको शिक्षा र स्वास्थ्य नितीले मानिसलाइ भ्रष्टाचारी बनाएको छ । समाजलाइ बिभाजित पारेको छ । अत:
सडक र शहर जरुर बिस्तार भएका छन तर शहरी गरिवी र वातावरणिय बिनासले मानविता नै संकटमा परेको छ । उदाहरण- काठमाण्डौ फैलियो, बागमती बिष्णुमती सुके; खेती गर्ने जग्गा शुन्य तिर झर्यो ! खै बिकल्प !!! अर्को सानो उदाहरण, युवा बिदेशिएर पैसो त पठाएका होलान तर अदालतमा छोडपत्रका उजुरी खातै खातले बडेकोछ; वालबच्चा र बुडाबुडिको बिचल्ली हुँदैछ । यसले सामाजिक समस्या थपिएकोछ । यस्तो बिकासे बिनासले नागरिकलाई असुरक्षित पारेको छ । अत: जनताको मत यी समस्या बुझेको नेत्रित्वको चयनमा पर्‍यो कि परेन भन्ने कुरा गम्भिर हो, त्यसैमा जनशक्ती निर्भर रहन्छ । तर वामदेव, वोली वा अन्य कुनै स्वघोषित नेत्रित्व को आगमन र परागमनले कुनै अर्थ राख्दैन । यस्तोखाले चयन पद्धती प्रजातन्त्र होइन, विक्रिती हो ।
फेसबूकवालको कमेण्ट प्रतिउत्तर
Posted in बिकासLeaveacomment
Previous Postसंघिय बिकास, प्रशासनिक खर्च र कर आतंकNext Postसंघिय संरचना बन्यो, तर शासकिय अनुशासन र लगानीको श्रोत जुटेको छैन